स्तरीय मैदान विना पनि राष्ट्रिय खेलाडी, वीरगंजको सान अरुको क्लबमा अंक जोड्दै
स्थानीयको सहयोगको खाचो
भदौ २१, २०७६ कविता खड्का
मुलुकको नेतृत्वमा हुनेले भन्दा क्रिकेट खेलाडीले विश्वमाझ देशको शिर ठाडो पारेको कुरा थाहा नपाउने नेपाली कमै होलान् । देशको नाम विश्वमाझ ठाडो पार्न अग्रसर नेपाली क्रिकेट खेलाडीले मुलुक भित्र भने अझैसम्म अन्तराष्ट्रियस्तर को खेल मैदान पाएका छैनन् । राजनीतिकर्मीको सान र दाम प्राप्त हुने कुरामा संविधान र कानूनमा सबैकुरा अटाउन सक्ने राजनीतिक विद्घानहरुले खेलाडीको लागि भने गतिलो मैदान् समेत दिन नसकेका हुन् ।
फुटबल मौदानमा नै मुग्रोु नचाएका क्रिकेट खेलाडीलाई लिएर पुवुदु दशनायकले वल्र्डकप सम्म नेपाली खेलाडीलाई डो¥याए । राजधानीको संगिता निवासमा समेत टाउको खुसार्न पुगेका राजनीति विद्घानहरुले देशका होनाहार युवाका लागि एउटा कुद्ने र उफ्रिने खेल मैदान चाहिन्छ भन्ने कहिले सोचेनन् । यति हुँदा पनि खेलाडीले भने आम समर्थकको प्रशंसा बटुल्न सके । यो देखेर मुलुककै वेइजती भएको ठानी, समाजसेवी कलाकार धुर्मुश सुन्तलीले देशको मर्यादा माथि उठाउन अन्तराष्ट्रियस्तरको खेल मैदान बनाउन सबैसामु हात नै फैलाएका छन् । कलाकारले भीख मागेर अन्तराष्ट्रियस्तरको खेल मैदान बनाउन अग्रसर हुँदा पनि देशको नेतृत्व अगाडी नसर्ने मुलुकका अगुवाहरुसँग खेलाडीको मन दुखेको छ । ुखेलु देशका लागी, खेलाडीका लागी र सबैको सम्मानका लागी भन्ने सोचको विकास कहिले हुन नसकेको वीरगन्जका क्रिकेट खेलाडीको पनि आरोप छ ।
देश भित्रैका क्रिकेटरमा वीरगंजेली युवाको योगदान पनि कम छैन । यो भूमि एक्लैले क्रिकेटमा मात्र देशलाई ५ राष्ट्रिय खेलाडी दिइसकेको छ । त्यसैले पनि यो भूमिका क्रिकेटरले पनि राज्यमाथि आरोप लगाउने आँट गर्न पाउँछन् । खेलको योगदानको कदर मात्र हुने हो भने पनि वीरगंजमा देशको राष्ट्रियस्तरका खेल इ.पी.एल, डी.पी.एल, पी.पी.एल, पि.एम. कप र विभिन्न प्रिमियम लिग हुनेमा दुईमत छैन । जेठो फुटवल खेल मैदान मध्येको नारायणी रंगशाला वीरगन्जमा नै रहे पनि यसको संरक्षण समेत कसैले गर्न सकेनन् । बल्ल मिडिया र खेलाडीको दवावले व्यवस्थित बनाउन डिपीआरको कुरा अगाडी आएको छ ।
कुनै पनि खेल प्रतियोगिता हुनु भनेको खेलाडीलाई अझ योग्य बनाउन सीप विकास गर्ने माध्यम पनि हो । तर अझै वीरगंज कै क्लब अन्तर्गत वीरगंजमै वी.पि.एल. खेल्न पाए हाम्रो पनि छुट्टै पहिचान हुने थियो पुलिस क्लबका तर्फबाट राष्ट्रिय खेलाडी समेत बनेका आरिफ शेखले बताए । गर्व लाग्छ वीरगंजको पहिचानको लागी खेल्दा उनले भने ।
प्रदेशस्तरीय खेलाडीहरु छनोट गरी वीरगंज प्रिमियर लिंग खेल्न पाए हाम्रो खेल अझै उत्कृष्ट हुने थियो । आर्थिक नगरी वीरगन्ज भनिन्छ । तथापि लिग आयोजनाका लागी कर्पोरेट संस्थाहरु सकारात्मक भएको देखिन्न अर्का खेलाडी सुरज कुमार कुर्मीले थपे । क्यान भएको बेला हामीलाई अवसर पाउथ्यो । क्यान खारेजी भएसंगै १६ औं, १९ औं र अण्डर २१ खेल समेत हुन पाएका छैनन् । जसले गर्दा हाम्रो अवसर समेत सकिएको जस्तो आभाष भइरहेको छ उनले तर्क गरे । स्थानीय आयोजकसंग मिलेर हामीले खेले मात्रै अवसर पाउने हो । नत्र भने आफ्नो खर्चमा मात्रै अभ्यासहरु गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
वीरगंजबाट राष्ट्रियस्तरमा खेलेका अविनास कर्ण, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रासिद खान, इसाद अहमद गरी ५ जना खेलाडीहरु यहि माटोले उत्पादन गरेका खेलाडी हुन् । यस्तै सुरज प्रसाद कुर्मी, हासिम अन्सारी, सौफुल्लाह अंसारी, संतोष कार्की लगायतले जिल्ला, प्रदेश र देशका लागी आफ्नो बेग्लै योगदान दिएका छन् । नव क्रिकेटर अभिशेख डंगोल, नितेश गुप्ता, सोनु शर्मा, राजा मन्सुरी, इमरान शेख लगायत पनि भविष्यका होनाहार खेलाडी हुन् ।
वीरगंज पथलैया करिडोर अन्तरर्गतका सूर्य नेपाल, जगदम्बा, सनराईज ग्रुप, चाचान ग्रुप, कन्साई ग्रुप, शालिमार, दुगड, रुगंटा ग्रुप लगायतका उद्योग प्रतिष्ठान संचालकले मुलुको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो टेवा पु¥याएका छन् । उनीहरुले एक नजर एक पटक यता तर्फ फर्काइदिए यो माटोका खेलाडीको प्रतिभा अझ उच्च हुने थियो । स्थानीय क्रिकेट खेलाडीहरुका लागी निःशुल्क रुपमा क्रिकेट पिच सञ्चालन गरि खेलाउँदै आएका शिक्षक ओम श्रेष्ठ स्थानीय सरकार, उद्योगी र व्यापारीहरुले खेलाडीको मर्म प्रति सोचिदिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । यहाँ लिग सञ्चालन भए खेलाडीसंगसंगै यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा समेत प्रवद्र्धन हुने उनको तर्क छ । यो ठाउँका खेलाडी अरु ठाऊँमा गएर खेल्दा आखिर वीरगन्जको सान त बढ्ने हो । अझ जित हासिल गरी आए त्यसको महत्व अझ अर्कैै हुन्छ उनले भने ।
वीरगंजका अविनास कर्ण, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रासिद खान, ईशाद खान राष्ट्रिय टोलिमा रहेर देश विदेशमा खेलिरहेका खेलाडीहरु हुन् । यी वाहेक उदीयमान खेलाडीमा सुरज प्रसाद कुर्मी, हासिम अन्सारी, सौफुल्लाह अंसारी, संतोष कार्की लगायतका खेलाडीहरु पनि उनीहरुको पथ पच्छ्याई रहेका छन् । यससंगै प्रदेश नम्बर २ को रौतहटका जितेन्द्र मुखिया, आंशु कदोई, सुनिल मिश्र, धनुषाका अनिल मण्डल, दिव्यान्शु मल्लिक, रामनरेश गिरी, सप्तरीका मेहबुव आलम, बाराका सन्जम रेग्मी, सर्लाहीका सांसद सेख लगायतका खेलाडीहरु सम्मिलित बलियो टिम बने लिग सञ्चालनमा यो प्रदेश पनि कम छैन ।
आफ्नै लगानी देशका उदीयमान खेलाडीहरु कहलिएका वीरगन्जका क्रिकेटर इ.पी.एल, डी.पी.एल, पी.पी.एल, पी.एम. कप र विभिन्न प्रिमियम लिगहरुमा अनुबन्दित भई खेल्न जाने गरेका छन् । ती क्लबहरुको नामले मात्रै परिचय हुने गर्दछ । यसले गर्दा २ नम्बर प्रदेशको राजधानी सुटुक्क जनकपुर पलायन भएजस्तै वीरगंजका उत्कृष्ट खेलाडीको योगदान पनि अरु नै क्लवको अंकमा थप भइरहेकेो पर्सा क्रिकेट संघका अध्यक्ष दाउद अंसारीले बताए । इ.पी.एल, डी.पी.एल, पी.पी.एल, पी.एम. कप र धनगढी प्रिमियम लिग लगायतका खेलहरु यहाँ नहुदाँ घरेलु आयोजकले समेत यहाँका खेलाडीलाई कमजोर ठान्छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । हिजोको दिनमा यही सिनतेज ट्रफि, टी–२०, एम.जि. ट्रफि टी–२० लगायतको खेल आयोजना भए पनि अहिले ती खेलहरु आयोजना नहुदाँ खेलाडीहरुलाई आत्मग्लानी हुने गरेको उनको तर्क छ ।
एक वर्षभित्र हामीले ३०÷४० लाखको लगानीमा खेलको सुरुवात गर्न लागेका छौं । तर लगानी उठ्ने चिन्ता छ । यहाँका खेलाडीहरुले प्रतियोगिता नचाहेका भने होइन । तर सुरु गर्नुपूर्व नै हतोत्साहित गर्नेहरु कम छैनन् उनले थपे ।
#मध्य नेपाल बार्षिकोत्सव विशेषंक : पिडा खेलाडीको
शनिवार, भदौ २१, २०७६, ०२:०९:००
फिफा विश्वकप २०२२ को खेल मिति घोषणा, नेपाली दर्शकलाई सहज
संसारकै उचाइमा एनसेल बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिता समपन्न
द हन्ड्रेडमा सन्दीप लामिछाने डेढ करोडमा आबद्ध
आश्विन ३०, २०७६ कविता खड्का
महुवनमा कुस्ती प्रतियोगिता समपन्न
आश्विन २१, २०७६ कविता खड्का